सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २७ जेठ २०७८)
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो टुप्पी र छोटो पुच्छरसहितको लामो कालो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ६९ दशमलव ९१ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद विक्रीचाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन १६ दशमलव ७१ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कामा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । बुधवारको शेयर मूल्य रु. ३७४ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ३४६ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।